भक्तपुरमा कोठा छ तर, आफू संक्रमित भएको कुरा घरबेटीलाई पनि भनेको छैन । कोठामा जाउ घरबेटीले फिर्ता गर्ला ? आफ्नो रिपोर्ट पोजिटिभ भएको देखाउँदा अस्पताल बसेको थाहा पाएपछि के भन्ला ? त्यसैले अफिसले व्यवस्था गरेकै ठाउँमा बसेको छु ।
प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०७:५७